Siyaasi Farmaajo Gumaysi diid oo ku soo wajahan Muqdisho iyo Kooxdiisa Ololaha doorashada oo dhaq dhaqaaqyo wada! | kowtharmedia.com
Home WARAR Siyaasi Farmaajo Gumaysi diid oo ku soo wajahan Muqdisho iyo Kooxdiisa Ololaha doorashada oo dhaq dhaqaaqyo wada!
Siyaasi Farmaajo Gumaysi diid oo ku soo wajahan Muqdisho iyo Kooxdiisa Ololaha doorashada oo dhaq dhaqaaqyo wada!
Dec 16, 2016WARAR
Ra’iisul Wasaarihii hore ahna Musharax u taagan xilka Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa lagu wadaa in todobaadka soo socda uu soo gaaro magaalada Muqdisho, si uu ololihiisa doorashada u xoojiyo.
Mr Farmaajo ayaa bilihii la soo dhaafay xarun u aheyd Nairobi, waxaana halkaas uu ka waday dhaqaaqyo siyaasadeed oo ku aadanaa ololihiisa doorashada.
Guddi ka shaqeynaya ololaha doorashada Farmaajo ayaa maalmihii la soo dhaafay soo gaaray magaalada Muqdisho, waxaana berri lagu wadaa inay soo gaaraan xubno kale oo horudhac ah safarkiisa.
Ololaha xooggan ee Kooxda Farmaajo ka wadaan magaalada Muqdisho ayaa maalmihii la soo dhaafay si aad ah looga dareemay, waxaana la kireeyay guryo ku yaala degmooyinka qaar oo uu ka socdo howlaha ololaha doorashada.
Wararka ayaa sheegaya in Farmaajo uu ku soo wajahan yahay Muqdisho Maalinta Talaadada ee soo socota, iyadoo magaalada ay geli doonto maalin mashquul, maadaama Farmaajo uu taageerayaal badan ku leeyahay Muqdisho.
Xarumaha Ololaha doorashada ee Farmaajo ayaa waxaa ka socda diyaar garow iyo abaabulo ku aadan soo dhoweyntiisa.
Farmaajo oo ka mid ah Musharaxiinta ugu cad cad doorashada Madaxweynaha ayaa Imaanshihiisa waxay ku soo aadeysa, iyadoo ay daaleen inta badan Musharaxiintii ku sugnaa Muqdisho, kuwaasoo qaarkood maalmahan warkooda la waayay, halka kuwa kalena safar aan la sheegin ugu ambabaxeen dalal dhowr ah.
Previous PostMuuqaal yaableh: Aabe Soomaaliyeed oo 21-ka Bishan laga tarxiilaayo Norwey oo 4 Caruur Ah Laga Reebay iyo Murugada Daawo! Next PostShacabka iyo; kooxihii ka dagaalamayey bariga Allepo oo basas looga saarayo magaalada Daawo Sawirro!!